आफूलाई चिन्ने मानिसहरूसँग उनले अरू बेलामा भन्दा निकै असहज महशुस गरेको कुरा उनको शारीरिक हाउभाउबाट नै प्रस्ट हुन्थ्यो।
पानीमाथिको ओभानो बन्नका लागि मान्छेले केसम्म गर्छन्, त्यो उनको अनुहारमा देखिन्थ्यो । खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार भन्ने उखान उनले दिमागमा घुसाएरै हिँडेका छन् कि जस्तो लाग्थ्यो।
प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि कोही सडकमा 'हामी यहाँ छौं' भन्दै गए । कोही तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएर जिल्ला दौडाहा गरेजस्तो ७ नम्बर गियर दबाएर हिँडिरहेका छन्। ती सिधै समुन्द्रमा हाम फाल्नुहोस् भन्ने अर्ति उपदेश दिन्छन् ।
एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व देशलाई संकट परेका बेला, त्यो पनि संवैधानिक संकट आएको बेला, जनताहरूलाई के गर्ने कसो गर्ने अन्योल भएका बेला, संविधानको निर्मम बलात्कारको प्रयास भइरहेका बेला संविधान सभा अध्यक्ष तथा व्यवस्थापिका संसद्मा सभामुख भइसकेको मान्छे, यति मात्र हैन २०४८ र २०५२ मा गरी दुईपटक राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, २०५६ कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको मान्छे कसरी हराउन सक्छ ? कतै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र त भएको छैन? छिमेकी देश चीनमा पनि एकजना व्यापारी हराएको समाचार सार्वजनिक भएका बेला नेम्वाङ काका पनि एकाएक हराउनु संयोग मात्र मान्न सकिन्छ र ?
हिजो मात्रै उनको पुरानो भिडियो सार्वजनिक भएको छ। शायद उनी नहराएको भए त्यसरी पुरानो भिडियो सार्वजनिक हुनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन ।
काभ्रेको धुलिखेलमा खिचिएको भनिएको त्यो भिडियोमा उनले भनेका छन्- 'प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्दैमा संसद् विघटन हुँदैन । चुनाव ठ्याक्कै ५ वर्षमा नै हुन्छ ।' नेम्वाङ काकाले उक्त भिडियोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हरेक दिन संसद् जाने गरेको स्मरण गर्दै संसदप्रति सरकारको दायित्वबारे पनि स्मरण गराउँदै भनेका छन्- ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हरेक दिन संसद्मा जानुहुन्थ्यो । उहाँ हरेक दिन संसद्मा पुगेर कुरा सुन्नुहुन्थ्यो। एक डेढघण्टा संसद्मा ढ्यापढ्याप गरेर कांग्रेस सांसद बोल्थे। यो कांग्रेसको आविष्कार हो भन्थे ।’ तर पुरानो भिडियोमा उनले जे बोलेपनि उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्- अहिलेको अवस्थामा नेम्वाङ काकाको आधिकारिक धारणा त्यो हुँदै हैन।
के नेम्वाङ काका हराएको नाटक गरेर तुलसी गिरीको लाइनमा गएकै हुन् त ? वा हराएकै हुन् ? तुलसी गिरी जो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष हुँदै राजाको मतियार बन्दै पटक-पटक सत्ता र शक्तिको स्वाद लिँदै गुमनाम मृत्युवरण गर्न पुगेका थिए। आफ्नो पद पाउन अनि जोगाउन वा शक्तिको नजिक बसिरहन रामबहादुर थापा 'बादल', प्रदिप ज्ञवाली, टोपबहादुर रायमाझीहरूले जे जस्ता कुतर्क गर्दै आइरहेपनि संविधान जानेबुझेका नेम्वाङ काका असंवैधानिक कदमको दोस्रो राधाकृष्ण मैनाली नहुने हो कि ?
नेम्वाङ काका, यदि तपाईं हराएकै हो भने कृपया माइतीघर मण्डलामा उपस्थित हुनुहोला। उहाँलाई देख्नु हुने जो केहीले नजिकको प्रहरी कार्यलय त नभनौं माधव नेपाल वा उनकै जिल्लावासी झलनाथ खनालको घरसम्म पुर्‍याइदिनुहोला है ।